Iye Zvino Ndinofunga Kuti Ndava Kukwanisa Kubatsirawo Vamwe — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
w15 10/1 pp. 10-11
Yakataurwa naJulio Corio
GORE REKUBEREKWA: 1981
NHOROONDO YOUPENYU: AKASANGANA NEMATAMBUDZIKO MAKURU ACHIRI MUDIKI
Ndakaberekerwa muAcul, taundi riri kwaro rega kumakomo ari kumadokero kweGuatemala. Mhuri yangu ndeyedzinza revaIxil, rudzi rwechiMaya. Ndakakura ndichitaura chiSpanish uye mutauro wekwedu. Ndakaberekwa pairwisana vagari vemuGuatemala uye hondo yacho yakaita makore 36 ichitsviriridza. Panguva iyoyo vaIxil vakawanda vakafa.
Mumwe musi pandaiva nemakore 4, mukoma wangu aiva nemakore 7 aitambisa girinedhi rinokandwa nemaoko, ndokubva raputika netsaona. Izvi zvakaita kuti ndive bofu, uye zvinosuwisa kuti mukoma wangu akabva afa. Zvadaro, ndichiri mwana mudiki ndakagara pane imwe nzvimbo inochengetwa mapofu iri muguta reGuatemala, uye ikoko ndiko kwandakadzidza Braille. Vashandi veko vaindirambidza kutaura nevamwe vana uye vandaidzidza navo vaisada kutaura neni asi handina kunzwisisa kuti vaizviitirei. Ndaigara ndakasurukirwa nguva dzose uye ndaingokwanisa kuenda kumba kwemwedzi miviri chete pagore. Ndaingoshuva kuti dai mwedzi iyi yasvika ndiende kuna amai vangu avo vaiva netsitsi. Chinorwadza ndechekuti amai vangu vakafa ndiine makore 10. Sezvo ndaiona sekuti ndakanga ndarasikirwa nemunhu mumwe chete aindida, zvakandigura kunorira.
Pandakanga ndava nemakore 11, ndakadzokera kutaundi randakaberekerwa, uye ndakatanga kugara nemukoma wangu, mwana wababa vangu, pamwe chete nemhuri yake. Vaindibatsira nezvinhu zvekurarama nazvo, asi hapana aikwanisa kundibatsira kuti ndigadzikane mupfungwa. Dzimwe nguva ndaichema kuna Mwari ndichibvunza kuti: “Amai vangu vakafirei? Nei ndiri bofu?” Vanhu vaindiudza kuti Mwari ndiye aiita kuti matambudziko ese aya aitike. Izvi zvakaita kuti ndifunge kuti Mwari haana tsitsi uye ane rusaruro. Chikonzero chakaita kuti ndisazviuraye kwaiva kushaya chekuzviuraya nacho.
Kuva bofu kwaiita kuti vanhu vaite zvavanoda neni. Ndichiri mukomana, ndakashungurudzwa kakawanda panyaya dzebonde. Handina kumbomhan’ara, nekuti ndaifunga kuti hapana aizoita hanya nazvo. Vanhu vaisawanzotaura neni, uye ndakanga ndisingakwanisi kutaura nevanhu. Ndaigara ndiri pangu ndega ndichingoshungurudzika, uye hapana kana wandaivimba naye.
Pandakanga ndava nemakore 13, Zvapupu zvaJehovha zviviri (murume nemudzimai) zvakauya kwandiri panguva yataimbozorora kuchikoro. Mumwe mudzidzisi wepachikoro pedu uyo aindinzwira tsitsi akanga avakumbira kuti vauye kuzondiona. Vakandiudza zvinovimbiswa neBhaibheri kuti vakafa vachamutswa uye kuti mapofu achaona zvakare. (Isaya 35:5; Johani 5:28, 29) Zvavaindidzidzisa ndakazvifarira, asi zvakanga zvakandiomera kuti nditaure navo, nekuti ndakanga ndisina kujaira zvekutaura nevanhu. Asi, pasinei nekuti ndaisada zvekutaura, vakaramba vachiuya kuzondidzidzisa Bhaibheri. Vaifamba makiromita anopfuura 10 uye vaizokwidza makomo kuti vasvike kwandaigara.
Mukoma wangu aindiudza kuti vaipfeka zvakanaka asi vakanga vasiri havo vanhu vemari. Kunyange zvakadaro, vaigara vachiratidza kuti vane hanya neni vachindipa zvipo. Ndakaona kuti vaKristu vechokwadi chete ndivo vanogona kuzvipira kusvika pakadaro.
Ndakadzidza Bhaibheri ndichishandisa mabhuku eBraille. Kunyange zvazvo ndainzwisisa zvandaidzidza, nechemukati pane zvakanga zvakandiomera kubvuma. Somuenzaniso, zvakanga zvakandiomera kubvuma kuti Mwari ane hanya neni uye kuti vamwe vanhu vaigona kundiona sezvandinoitwa naMwari. Ndainzwisisa chikonzero nei Jehovha achibvumira kutambura panguva ino, asi zvaindiomera kuti ndimuone saBaba vane rudo.*
Zvishoma nezvishoma, zvandakadzidza muMagwaro zvakandibatsira kuchinja maonero angu. Somuenzaniso, ndakadzidza kuti Mwari anorwadziwa nekutambura kwevanhu. Achitaura nezvevanhu vake vaimunamata avo vaibatwa zvisina kunaka, Mwari akati: “Chokwadi ndaona kutambudzika kwevanhu vangu . . . ndinonyatsoziva kurwadziwa kwavo.” (Eksodho 3:7) Pandakanzwisisa kunaka kwakaita Jehovha, ndakabva ndazvitsaurira kwaari. Ndakabhabhatidzwa muna 1998, ndokuva mumwe weZvapupu zvaJehovha.
Ndiine hama yakanditora kuti ndigare nayo
Pashure perinenge gore ndabhabhatidzwa, ndakaita imwe kosi yakaitirwa mapofu pedyo neguta reEscuintla. Mumwe mukuru wemuungano yeko akaziva nezvematambudziko andaisangana nawo kuti ndipinde misangano yekunamata ndiri kutaundi rekumba kwedu. Pafunge, ungano yaiva pedyo yakanga iri kuseri kwemakomo kwaibva Zvapupu zviya zvakadzidza neni, uye zvakanga zvakandiomera kuti ndiende ikoko. Saka kuti andibatsire, mukuru wacho akatsvaga mhuri yeZvapupu yekuEscuintla yaiva nechido chekuti ndigare nayo ichindibatsira kuti ndipinde misangano yekunamata. Nanhasi, vanondichengeta semwana wavo chaiye.
Pane zvimwe zvakawanda zvakaitwa nevandinonamata navo zvinoratidza kuti vanondida zvechokwadi. Zvese izvi zvinoita kuti ndive nechivimbo chekuti seChapupu chaJehovha, ndiri pakati pevaKristu vechokwadi.—Johani 13:34, 35.
Handichanzwi sendisingakoshi uye ndava netariro. Iye zvino upenyu hwangu hwava nechinangwa. Sezvo nguva yangu yakawanda ndichiishandisa pakuita basa rekudzidzisa vanhu Bhaibheri rinoitwa neZvapupu zvaJehovha, ndinoisa pfungwa dzangu pakudzidzisa vamwe chokwadi chiri muBhaibheri pane kuswera ndichifunga nezveurema hwangu. Ndinoshandawo semukuru muungano uye ndinombopa hurukuro dzinotsanangura zvinodzidziswa neBhaibheri muungano yedu nedzimwe dzakapoteredza. Ndakatombowanawo ropafadzo yekupa hurukuro dzinotsanangura zvinodzidziswa neBhaibheri pamagungano emunharaunda anopindwa nezviuru zvevanhu.
Ndichishandisa Bhaibheri rangu reBraille kupa hurukuro
Muna 2010, ndakapinda Chikoro Chokudzidzisa Vashumiri (chava kunzi Chikoro Chevazivisi Vemashoko oUmambo) chakaitirwa kuEl Salvador. Chikoro ichi chakandibatsira kuti ndiite mabasa angu muungano zviri nani. Kupinda kwandakaita chikoro ichi kwakaita kuti ndione kuti Jehovha, uyo anogona kuita kuti chero ani zvake aite basa rake, anondikoshesa uye anondida.
Jesu akati: “Kupa kune mufaro mukuru kupfuura kugamuchira.” (Mabasa 20:35) Iye zvino, ndinogona kuti ndava kufara, uye ndinofunga kuti ndava kukwanisa kubatsirawo vamwe, kunyange zvazvo ndaimbofunga kuti handingambozvigoni.
Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pekuti nei Mwari achibvumira kutambura, ona chitsauko 11 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.